Ny mpamorona oksizenina PSA dia mitana andraikitra lehibe amin'ny indostria
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-07
Ny mpamokatra oksizenina PSA dia mampiasa sieve molekiola zeolite ho toy ny adsorbent, ary mampiasa ny fitsipiky ny adsorption pression sy ny desorption decompression hamoaka sy hamoaka oksizenina avy amin'ny rivotra, amin'izay dia manasaraka ny oxygen amin'ny fitaovana mandeha ho azy. Ny fisarahan'ny O2 sy N2 amin'ny sivanave molekiola zeolite ...
Nihaona tamin'ny sampana Ding Zong tany Yin ny filoha koreana Wen
Ny filoha Moon Jae-in avy any Korea atsimo dia nihaona tamin'Andriamatoa Ding ao amin'ny tarika misy anay, manantena ny hisian'ny fiaraha-miasa tsaratsara kokoa sy ho avy a fitokisana amin'ny orinasanay sy ny vokatray izany. manerana an'izao tontolo izao. ...
Ny famolavolana ny fitaovana oksizena / azota
Ny famolavolana ny Oxygen / Nitrogen Plant dia mifototra amin'ny Liquification of Air mifototra amin'ny tsingerin'ny tsindry ambany sy salantsalany. Ny tsanganana fisarahana an'habakabaka dia manana fitoeran-jiro distillation BOSCHI manara-penitra, mpanakalo sy mpandefitra marobe mba hahazoana vokatra oksizena avo lenta amin'ny fisarahana ...
Tsenan'ny fampisarahana ny rivotra: antenaina hahatratra ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny taona 2020 sy hatramin'ny 2026
"Ny tatitra an'ny Intellect dia manome ny tatitra farany momba ny famakafakana sy ny vinavinan'ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra hatramin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2026. Manome hevi-dehibe ny tatitra ary manome tombony ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny tatitra amin'ny antsipiriany. Ho fanampin'izany ...
Amin'ny taona 2026, ny tsenan'ny zava-maniry manasaraka ny rivotra manerantany dia hahita fitomboana lehibe
DBMR dia nanisy tatitra vaovao antsoina hoe "Air Separation Equipment Market", izay misy tabilao data an-taonan'ny tantara sy ny tombana. Ireo tabilao angona ireo dia soloin'ny "chat and graph" miparitaka manerana ny pejy ary mora azo ny famakafakana amin'ny antsipiriany. Ny fisarahana amin'ny rivotra ...
Tatitry ny tsenan'ny fampisarahana ny rivotra, ny fanadihadiana ny fifaninanana, ny paikady naroso, ny tanjona kendrena voalohany azo vahana, ny fepetra takiana lehibe
Ny AMR (Ample Market Research) dia nanampy ny tatitra "Air Separation Equipment Market" tamin'ny lisitra goavambe nataony. Ny ampahany lehibe amin'ny tatitra momba ny "Air Separation Equipment Research Research" dia namerina ny lafiny maro amin'ny tsena ary nanome ny fepetra momba ny tsena mifandraika amin'izany, ny ...